March 6, 2022 AdminLeaveaComment on म उसैको खाजाघरमा पसे, लगभग १५ मिनेट लाग्यो ! पुरा पढ्नुहाेस…
आज पनि गाडीको झ्यालबाट थोरै नियालेर हेरें। ऊ त्यहीँ उभिएको थियो। हातमा सधैं झैं मोबाइल। अर्को हातमा कहिले कफी त कहिले केहि न केहि खानेकुरा समातेकै हुन्थ्यो उसले। फेरि मुख पनि कहिले खाली नहुने। चुइगम चपाएको चपाएकै गर्ने। भोलिपल्ट सधैंको समयमा गाडी गन्तव्य तर्फ मोडियो।
के भएको यो मन पनि। ऊ अपरिचित हो। को हो कहाँको हो? अनि के गर्छ किन यहाँ उभिन्छ? केहि थाहा भएको होइन। तैपनि यो मन। अनि यहि मनले निर्देश गर्ने यी आँखा।
अनायसै किन खोज्नु होला त्यो खम्बामा उभिएको अपरिचितलाई। घरीघरी त आफैलाई थकथकी लाग्छ। सायद सधैं देख्दा आँखालाई बानी परिसकेको हुनसक्छ।
गाडीमा मान्छे आइसकेछ। गाडी पुनः गन्तव्यतिर गुड्न थाल्यो। गाडीको स्पिकरमा गीत बजाउँदै एफएम सुन्दै हिंड्ने बानी परेको थियो। आज भने गीत लगाउन चासो लागेन।
एकछिन शुन्य महशुस भो। त्यो दिन यत्तिकै मनमा कुरा खेलेर सकियो। काम र आफ्नै मनसँगको अन्तरद्वन्द्वको चापमा दिन कतिखेर बित्यो पत्तो नै हुँदैन रैछ।
ट्राफिक व्यस्तताको कारणले ऊ उभिने ठाउँ नजिक पुग्न लगभग १५ मिनेट लाग्यो। कहिलेकाहीँ त बरु पैदल नै गएको भए चाँडो पुगिन्छ जस्तो लाग्ने। गाडीको हर्न उस्तै बज्छ।
सबै हतारमा हिंडिरहेका देख्दा यो शहरमा फेरि फर्केर नआउँ झैं लाग्छ। तर भौतिक शुखका लागि आफैले रोजेर आएको शहर न पर्यो यो। चाहँदा बित्तिकै यसको साथ कसरी छुटोस त। यो यथार्थ सबैमा लागू नहोला।
गाडीबाट झर्नासाथ ऊ उभिने ठाउँमा आँखा पुग्यो। उसको हातमा भएको मोबाइलको कलर सेतो देखिन्थ्यो। त्यही मोबाइलमा मस्त हुने ऊ उभिने केहि पर सानो खाजा घर छ।
कहिलेकाहीँ हामी काममा जाँदै गर्दा त्यहीँ नास्ता गर्दै नास्तावालीसँग गफिने गर्दथ्यौं। औपचारिक भाषा सबै नजानेपनि खाने पिउने सम्बन्धी शब्दहरू बोल्नाले खाजाघरकी चिनानी पनि साथी बनेकी थिइन्।
फोनमा बोल्दै देखाउछु भन्दै खोल्न थाले पछि भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !